नेप्से र कारोबार दुवै बढ्यो - Naya Patrika
नेप्से र कारोबार दुवै बढ्यो
ब्याजदर नबढाउने बैंकर्सहरूले सहमति गरेपछि बढेको नेप्से मंगलबार पनि बढेको छ । यस दिन नेप्से परिसूचक १२ दशमलव २७ अंक बढेको छ । बजार खुलेदेखि तीव्र गतिमा उकालो लागेको नेप्से १ हजार ४ सय ५४ बिन्दुमा पुगेर सामान्य ओरालो लागेको थियो । त्यसपछिको समयमा सामान्य उतारचढावमा रहेको नेप्से अन्तिम समयसम्ममा शून्य दशमलव ८५ प्रतिशत बढेर १ हजार ४ सय ५६ दशमलव शून्य ७ बिन्दुमा पुगेर बन्द भएको छ । बजार निरन्तर बढेपछि लगानीकर्ताको मनोबल पनि बढेको छ । बजारमा तरलता सहज भएका कारण कारोबार रकम र बजारमा सुधार देखिएको एक ब्रोकरले बताए । नेपाल राष्ट्र बैंकले बजारमा अधिक तरलता भएका कारण सोमबार रु. २ अर्बबराबरको तरलता प्रशोचन गरेको छ । गत साता मात्रै तरलता सहज गर्न केन्द्रीय बैंकले रु. ३५ अर्ब बजारमा पठाएको थियो ।
मंगलबार १ सय ५९ कम्पनीको ४ हजार ६ सय २ पटकको कारोबारमा रु. ५१ करोड १ लाख २३ हजार ४ सय ३४ बराबरको ९ लाख २४ हजार ५ सय ५४ कित्ता सेयर खरिदबिक्री भएको छ । यो अघिल्लो कारोबार दिनको तुलनामा रु. ३ करोड ७१ लाख बढी हो । ‘क’ वर्गको कारोबार मापन गर्ने सेन्सेटिभ इन्डेक्स यस दिन २ दशमलव ६९ अंक बढेर ३ सय ६ दशमलव ८७ बिन्दुमा पुगेको छ । नेप्सेको १४ दिने आरएसआई यस दिन ४७ दशमलव ४६ स्केलमा पुगेको छ । न्युट्रल जोनमा रहेको यस आरएसआईले बजारमा सेयर खरिदबिक्री चाप सन्तुलनमा रहेको संकेत गर्दछ ।
नेपाल लाइफ इन्स्योरेन्सको सेयर कारोबार सबैभन्दा बढी भएको छ । यस दिन सो बिमा कम्पनीको रु. ६ करोड ३६ लाखबराबरको सेयर खरिदबिक्री भएको छ । त्यसैगरी, सानिमा माई हाइड्रोपावरको यस दिन रु. ५ करोड ५२ लाखभन्दा बढीको सेयर किनबेच भएको छ । बेस्ट फाइनान्सको सेयरमूल्य यस दिन ६ दशमलव ११ प्रतिशत बढेको छ । एभरेष्ट इन्स्योरेन्सको सेयरमूल्य यस दिन ९ दशमलव ९ प्रतिशत घटेको छ । यस दिन कारोबारमा आएका १ सय ५९ कम्पनीमध्ये १०० कम्पनीको सेयरमूल्य बढेको छ भने ३९ कम्पनीको सेयरमूल्य घटेको छ । बाँकी २० कम्पनीको सेयरमूल्य स्थिर रहेको छ ।
कारोबारमा आएका दश समूहको परिसूचकमध्ये एक समूहको मात्र परिसूचक घटेको छ । यस दिन होटेल समूहको परिसूचक सर्वाधिक २ दशमलव ८५ प्रतिशत बढेको छ । बैंकिङ समूहको परिसूचक १ दशमलव शून्य ४ प्रतिशत, माइक्रोफाइनान्स समूहको १ दशमलव शून्य ३ प्रतिशत, विकास बैंक समूहको शून्य दशमलव ८९ प्रतिशत, ट्रेडिङ समूहको शून्य दशमलव ६६ प्रतिशत, ‘अन्य’ समूहको शून्य दशमलव ६३ प्रतिशत, बिमा समूहको शून्य दशमलव ४५ प्रतिशत, जलविद्युत् समूहको शून्य दशमलव ३१ प्रतिशत र वित्त समूहको शून्य दशमलव शून्य ९ प्रतिशत बढेको छ । कारोबारमा आएको उत्पादनमूलक समूहको परिसूचक भने यस दिन शून्य दशमलव १२ प्रतिशत घटेको छ ।
नेपाल दूरसञ्चारको नगद लाभांश खातामा जम्मा गरिने
नेपाल दूरसञ्चार कम्पनी लिमिटेडले नगद लाभांश सेयरधनीहरूको बैंक खातामा जम्मा गर्ने भएको छ । पुस ३० गते हुने कम्पनीको साधारणसभाले सो नगद लाभांशको प्रस्ताव पारित गर्नेछ । हालसम्म भौतिक सेयर धारण गरेका सेयरधनीहरूलाई कम्पनीले शीघ्र हितग्राही खाता खोली बैंकको नाम र खाता नं. समेत अभिलेख गराउन अनुरोध गरेको छ । सो लाभांश एनएमबी बैंकले वितरण गर्ने व्यवस्था गरेको छ ।
उन्नति माइक्रोफाइनान्सको आइपिओ निष्कासन बन्द
उन्नति माइक्रोफाइनान्स वित्तीय संस्था लिमिटेडले पुस २१ गतेदेखि निष्कासन तथा बिक्री खुला गरेको १ लाख ५० हजार १ सय ५० कित्ता साधारण सेयरमा आवेदन दिने म्याद पुस २५ गते सकिएको छ ।
कम्पनीले निष्कासन गरेका कुल १ लाख ६५ हजार कित्ता सेयरमध्ये ४ प्रतिशत कित्ता साधारण सेयर कम्पनीको कर्मचारीहरूका लागि सुरक्षित गरिएको छ । त्यसैगरी, ५ प्रतिशत साधारण सेयर सामूहिक लगानी कोषहरूका लागि बाँडफाँट गरिएको थियो । कम्पनीको सेयर निष्कासन तथा बिक्री प्रबन्धक सिद्धार्थ क्यापिटल लिमिटेड रहेको छ ।
मंगलबार नेप्सेमा पाँच कम्पनीले कुल ३ करोड ३७ लाख ३३ हजार ८ सय ९ दशमलव ९ कित्ता सेयर सूचीकृत गरेका छन् । यस दिन नबिल बैंकले १ करोड ८५ लाख ७७ हजार १ सय ४० कित्ता, सानिमा बैंकले १ करोड १० लाख ३६ हजार २ सय १४ दशमलव ४ कित्ता टुरिजम डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले १७ लाख १० हजार ७ सय ७५ कित्ता र ङादी ग्रुप पावरले ४ लाख ८६ हजार ८ सय ६८ कित्ता बोनस सेयर सूचीकृत गरेका छन् । त्यसैगरी, एक्सेल डेभलपमेन्ट बैंक लिमिटेडले भने १९ लाख २२ हजार ८ सय १२ दशमलव ५० कित्ता हकप्रद सेयर सूचीकृत गरेको छ ।
कामना सेवाको बुक क्लोज
कामना सेवा विकास बैंकले माघ ३ गते बुक क्लोज गर्ने भएको छ । बैंकले हकप्रद सेयर निष्कासन प्रयोजनका लागि बुक क्लोज गर्न लागेको हो । कात्तिक १ गते सम्पन्न बैंकको साधारणसभाले १० बराबर १ दशमलव ५ अनुपातमा हकप्रद सेयर निष्कासन गर्ने प्रस्ताव पारित गरेको थियो ।
स्वावलम्बनको नगद लाभांश खातामा
स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंक लिमिटेडले ११ दशमलव ५७ प्रतिशत नगद लाभांश बैंक खातामा जम्मा गरेको छ । मंसिर १५ गते सम्पन्न बैंकको साधारणसभाले सो नगद लाभांशको प्रस्ताव पारित गरेको थियो । बैंकले कात्तिक २७ गतेसम्म हितग्राही खातामा बैंक खाता अद्यावधिक गराएका सेयरधनीहरूको खातामा सो नगद लाभांश जम्मा गरेको हो । बैंकको सेयर रजिस्ट्रार एनआइबिएल क्यापिटल मार्केट्स लिमिटेड रहेको छ ।
हिमालयनको सञ्चालकमा श्रेष्ठ
हिमालयन जनरल इन्स्योरेन्स लिमिटेडले दशरथलाल श्रेष्ठलाई स्वतन्त्र सञ्चालक नियुक्त गरेको छ । पुस १९ गते बसेको कम्पनीको सञ्चालक समितिको बैठकले श्रेष्ठलाई सो पदमा नियुक्त गरेको हो ।
विजयको नगद लाभांश खातामा
विजय लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडले ५ प्रतिशत नगद लाभांश सेयरधनीहरूको बैंक खातामा जम्मा गरेको छ । कम्पनीले कात्तिक ३० गतेसम्म हितग्राही खाता अद्यावधिक गराएका सेयरधनीको खातामा सो लाभांश जम्मा गरेको हो । साथै, हालसम्म भौतिक सेयर धारण गरेका सेयरधनीहरूलाई कम्पनीले अभौतिकीकरण गराई खाता अद्यावधिक गराउन अनुरोध गरेको छ ।